Using Myanmar Sar without Jailbreak | Saturngod
Using Myanmar Sar without Jailbreak
9 Replies ဒီနေ့ Sar ကို update လုပ်ရင်း SG store မှာ ရေးထားတဲ့ comment တစ်ခု သွားတွေ့တယ်။
This is not we wanted, we want to type zawgyi for chatting n want to read mm news.
မဝယ်ခင် description ကို မဖတ်ဝယ်လိုက်တယ်နဲ့ တူတယ်။ Sar က ကျွန်တော့်လို လမ်းသွားလမ်းလာ blog ရေးတတ်တဲ့ သူတွေ နောက်ပြီး စာရေးတာကို အဓိက ထားတဲ့ သူတွေ အတွက် ရေးထားတာပါ။
Gtalk အတွက် ဆိုရင် myanchat ရှိပါတယ်။
သတင်း အတွက် ဆိုရင် mmnews ရှိပါတယ်။
Google Reader အတွက် ဆိုရင် Gardar ရှိပါတယ်။
Web Browser အတွက်ဆိုရင် Mogok ရှိပါတယ်။
အခု အချိန်မှာ iOS တစ်ခုလုံးက မြန်မာစာ ကို support မလုပ်သေးတဲ့အတွက် jailbreak မလုပ်ထားတဲ့ သူတွေကတော့ အထက် ပါ App တွေ ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မဝယ်ခင်မှာ Description ကို သေချာဖတ်ချင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ မှားဝယ်မိလို့ refund ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဝယ်ထားတဲ့ Receipt Email ထဲမှာ report problem ဆိုတာ ပါပါတယ်။ ပြန်ပြီး refund လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ် ။ Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing and tagged iOS, myanmar, sar on December 5, 2012 by saturngod. Post navigation
← Build Media Center with Raspberry Pi
Generate Keys [Snippet] →
9 thoughts on “Using Myanmar Sar without Jailbreak” Tin Aung Linn December 5, 2012 at 10:22 am I am ok in everything with Mogok.Justalittle slow in viewing facebook. ALL ok.
Reply ↓ yu December 6, 2012 at 9:07 am I wrote some text with Sar and saved in iCloud. But I can’t find anywhere this file in my iCloud. Could you please advise me.
Reply ↓ saturngod Post authorDecember 6, 2012 at 9:15 am iCloud မှာ file တစ်ခုကို create လုပ်ပြီး သိမ်းလိုက်တယ်။ သို့ပေမယ့် မပေါ်လာဘူး ပြောတာလား ? ဒါမှမဟုတ် iPhone မှာ သိမ်းထားတဲ့ iCloud file က iPad မှာ မပေါ်တာကို ပြောတာလား ?
App တစ်ခုအတွက် iCloud က အဲဒီ app မှာပဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ https://developer.icloud.com/ ကို သွားပြီးတော့ လက်ရှိ iTunes Store က email နဲ့ Password နဲ့ ဝင်ကြည့်ပါ။ —-com~comquas~sar အောက်က Document ကို ဝင်ကြည့်ပါ။ iCloud မှာ သိမ်းထားတာတွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Reply ↓ yu December 6, 2012 at 9:43 am Saved from iPhone and checked in iCloud website using with computer. Your second solution works for me. Thanksalot.
Reply ↓ saturngod Post authorDecember 6, 2012 at 9:47 am icloud.com က apple products တွေ ဖြစ်တဲ့ icloud mail , contact , calendar , note, reminder နဲ့ iWork တွေ အတွက်ပဲ ရပါတယ်။ iCloud file တွေကို access လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် မမြင်ရတာပါ။ https://developer.icloud.com/ ကို သွားမှသာ iCloud ကို အသုံးပြုထားတဲ့ App တွေရဲ့ File အားလုံးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Sar ကို အသုံးပြုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply ↓ KyawHa December 7, 2012 at 4:37 pm How to install Myanmar Font for Kindle Hd (Android 4.0)?
Reply ↓ saturngod Post authorDecember 10, 2012 at 9:58 am It’s android and you can install font after root. I don’t have Kindle HD and I couldn’t tell exactly.
1. You must root it
2. Install one of the font switcher apps
3. Add Zawgyi in SD card and change system font with font switcher apps
Reply ↓ Knz December 28, 2012 at 8:48 pm ကိုစေတန် ကျွန်တော့် ပြဿနာက iPad2iOS 6.1 beta4မှာ “Sar” ကို သုံးတော့ မြန်မာ ကီးဘုတ် လက်ကွက် မပေါ်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ မြန်မာစာ ကို မှန်းရိုက်လိုက်ရင်တော့ ပေါ်ပါတယ်။
ကီးဘုတ် မမြင်ရတော့ အက္ခရာတွေ မတွေ ့ရတော့ အဆင်မပြေဖြစ်နေပါတယ်..
Reply ↓ saturngod Post authorJanuary 2, 2013 at 11:42 am I will check tonight and let you know. Thanks.
ပါရမီရှင်ဆိုတာ ဝါသနာနဲ့ ကိုယ့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် သင့်တော်တာ တထပ်တည်းကျနေတဲ့သူပဲ။ — unknown Job VacancyWe want IT TechnicianWe want JAVA Programmer !!!!Seeking volunteers forawordpress.com blogSenior ProgrammerOpen source senior programmer and Project Manager post at Tbit SolutionJOB OPPORTUNITYFreelance to write the project with Java springService Technician (၁) ဦးအလိုရှိသည်IT AdministratorPHP Web Developer (Urgently) Tweets by @saturngod